सबै Archives - नमस्ते खबर
विवाहकाे वहान बनाएर पाँच रात संगै सुतेका प्रेमी एकाएक गायभ भएपछि सुन्धारामा हंगामा – काठमाडौं । विवाहकाे वहान बनाएर पाँच रात संगै सुतेका प्रेमी एकाएक गायभ भएपछि सुन्धारामा हंगामा मच्चियाे । रौतहटको विश्रामपुरका अशोक गुप्ता र विराटनगरकी शैली एउटै कम्पनीमा काम गर्थें । काम गर्दा गर्दै उनीहरूकाे सम्बन्ध निकट हुँदै गयाे । नजिक हुदै जाँदा उनीहरु एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाले । सम्बन्ध यति नजिकियाे कि उनीहरु एकअर्कालाई छोड्न नसक्ने अवस्थाका भए । अन्तरजातीय सम्बन्धलाइ लिएर प्रेम निकै झाँगियाे । उनीहरूकाे सम्बन्धलाई परिवारले नमान्ने डर दुवैलाई थियो । कारण थियाे अन्तरजातीय…
﻿﻿﻿﻿﻿ काठमाडौं सम्झना यस वर्ष महाशिवरात्रिमा शिवका उपासकहरूले पशुपति परिसरमा शिवबुटी (गाँजा) सेवन गर्न पाएनन्। पशुपति गाँजा निषेधित क्षेत्र बनेछ। सदियौंदेखि पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने दिगम्बर बाबाजीहरूलाई सरकारले नै गाँजा बन्दोबस्त गरेर नेपाली आतिथ्य झल्काउने त्यो परम्परा अब टुट्यो। सन् १९७३ बाट नेपालले गाँजा, भाङ, चरेस आदि ओसारपसार, खेती, व्यापार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसका लागि अमेरिका लागिपरेको थियो। आज ४५ वर्षपछि अमेरिकाका २९ राज्यमा यो बुटीले वैधानिकता पाइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति ‘मारियुएना’ खपत गर्ने देश अमेरिका नै हो। अमेरिकाको गाँजा अर्थतन्त्र ८…
अचम्म ! धादिङमा बाख्राले मान्छेजस्तै पाठो पायो, हेर्नुहोस् तस्बिर –
अचम्म ! धादिङमा बाख्राले मान्छेजस्तै पाठो पायो, हेर्नुहोस् तस्बिर – धादिङ, २ चैत । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र रुबीभ्याली गाउँपालिकाको लापामा बाख्राले मान्छेजस्तै पाठो जन्माएको छ । स्थानीय कृषकले पालेको बाख्राले चार खुट्टासहित मान्छेजस्तै देखिने पाठो जन्माएको हो । जिउँदै जन्मेको उक्त पाठो केही समयपछि मरेको थियो । मरेको पाठो हेर्न स्थानीयको भिड लागेको स्थानीय सुमन घलेले जानकारी दिए । बाख्राको पाठोको चार खुट्टा र शरीरभरी रौं हुन्छन् । तर, मान्छेको जस्तै आकृति भएको पाठोको छाला मानिसको बच्चाको जस्दै देखिन्छ । शरीरमा रौं छैनन् । अन्य समाचार हेर्नुहोस् ३ चैत, काठमाडौं…
शाकाहार, आरोग्यता र अहिंसा
March 17, 2018 namestekhabar
मेरो नजरत्य हीँ अडिरह्यो। मनमा दौडाहा चल्यो, साह्रै कुँडिएँ। अहो ! मानिस कति स्वार्थी छ। काम विशेषले उपत्यकाबाहिरबाट काठमाडौंतिर फर्किँदै थिएँ। थानकोटको लामो जाम त हाम्रो आदतै भइसक्यो। मेरो नजर छेउको ट्रकमा ठोक्कियो। ट्रकभरि भैँसीलाई कोच्याइएको छ। घाँटी र खुट्टामा त बाँधेकै छ तर पुच्छर र सिङमा समेत कसिएको रहेछ। हलचल गर्ने कतै पनि ठाउँ छैन, अवसरै छैन। कति टाढाबाट ल्याएको हुँदो हो। गाडीको फलामे धारले खुट्टाको जोड्नीमा घाउ बेस्सरी थिलिथलिएको छ। रगतपच्छे भएका ती भैंसीको बिजोग देखेर मैले म मान्छे हुनुलाई धिक्कार्न चाहेँ। कलंकीमा आइपुगेर बस रोकियो। एकछिनपछि गाडीको…
कस्को पो रहर हुन्छ होला र सडक पेटीमा बसेर मागेर गुजारा चलाउने ? जे गर्छ बाध्यता र परिस्थितिले गर्छ ! जस्को आफ्नो परिवार पनि छैन (भिडियो) –
March 16, 2018 joes_limbu joes_limbu
कस्को पो रहर हुन्छ होला र सडक पेटीमा बसेर मागेर गुजारा चलाउने ? जे गर्छ बाध्यता र परिस्थितिले गर्छ ! जस्को आफ्नो परिवार पनि छैन (भिडियो) – कस्को पो रहर हुन्छ होला र सडक पेटीमा बसेर मागेर गुजारा चलाउने ? जे गर्छ बाध्यता र परिस्थितिले गर्छ ! जस्को आफ्नो परिवार पनि छैन (भिडियो) अन्य समाचार हेर्नुहोस् २ चैत, बुटवल । बुटवलमा जारी २० औं तिलोत्तमा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार हुदैछ । शनिबार थ्री स्टार क्लब र नेपाल पुलिस क्लब शनिवार उपाधीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा…
मध्यरातमा छोरीको कोठामा केटाको आवाज, विवश छोरीको कारण थाहा पाउदा सबै आश्चर्य चकित
मध्यरातमा छोरीको कोठामा केटाको आवाज, विवश छोरीको कारण थाहा पाउदा सबै आश्चर्य चकित मध्यरातमा छोरीको कोठामा केटाको आवाज, विवश छोरीको कारण थाहा पाउदा सबै आश्चर्य चकित मध्यरातमा छोरीको कोठाबाट केटा बोलेको आवाज आएपछि हेर्न गएका बाबुआमाले छोरीलाई छिमेकी युवकसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटे । सुरुमा उनीहरुलाई दुईबीच प्रेम भएको जस्तो लाग्यो । तर, वास्तविकता अरु नै थियो । बाबुआमालाई सत्य थाहा पाउन केही समय लाग्यो । वास्तवमा ती छोरी एक भिडियोको कारण ती युवकले जे भन्यो त्यही मान्न विवश थिइन् । ती युवकले केही दिनअघि ती किशोरीलाई बलात्कार गरेका थिए ।…
March 16, 2018 March 16, 2018 joes_limbu joes_limbu
बेमौसमी हिमपात हुदा खुसी थपियो प्रकृतिक सौन्दर्य पुनहिलका केही लोभ लाग्दा फोटोहरू
म्याग्दी — म्याग्दीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने प्रशिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र महरे, घोडेपानी/पुनहिल, खोप्रा बेमौसमी हिउँले ढपक्कै ढाकिएको छ । गुराँस फुलेर राताम्मे भएको संसारको सर्वाधिक ठूलो गुराँसे जंगल बेमौसमी हिउँले छोपेपछि सेताम्मे बनेको छ ।पदयात्राको पीक सिजन भएकोले अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्गको घान्द्रुक–घोडेपानी क्षेत्रमा पर्यटकको घुईंचो लागेको छ । पदमार्गका जंगल गाडा रातो, रातो, सिम्रिक, गुलावी गुराँस ढकमक्क फुलेर राताम्मे भएकोमा बिहीबार हिउँले छोपेको हो ।
जसको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै अन्तिम बन्यो
जसको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै अन्तिम बन्यो बीबीसी । पच्चीस वर्षीया पृथुला रशिदका लागि सह-चालकका रूपमा त्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान थियो। उनले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि काठमाण्डूमै गरेकी थिइन्। उनी डेढ वर्षदेखि विमानचालकका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। बीबीसी बांग्लासँग कुरा गर्दै उनकी आफन्त तासामिन रहमान ओमीले भनिन् – उनका बुवा-आमालगायत परिवारका धेरै जनालाई पृथुला विमानचालक बन्ने कुरा मन परेको थिएन। जोखिम उनका बुवाआमाले आफ्नी एक मात्र सन्तानले निरन्तर जोखिम भइराख्ने पेसा अँगाल्ने कुरा स्वीकार्न सकेका थिएनन्। एक मात्र सन्तानले जीवनमा निरन्तर जोखिम हुने पेशा अँगालेको स्वीकार गरिरहेका थिएनन्।…
मलाई पनि प्यारी छोरीको शवसँगै जलाइदिए हुन्छ
मलाई पनि प्यारी छोरीको शवसँगै जलाइदिए हुन्छ काठमाडौ ।‘मैले निकै दुःखले हुर्काएको छोरीको शव आफ्नै हातले दागबत्ती दिएर जलाउन पाउनुपर्छ । नत्र मलाई पनि प्यारी छोरीको शवसँगै जलाइदिए हुन्छ,’ बुधबार महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भेटिएकी उर्मिला प्रधानले भनिन् । सम्बन्ध विच्छेद गरेर छुट्टै बसेका श्रीमान् छोरी श्वेताको मृत्युपछि शव दाबी गर्न आएपछि उर्मिला निकै भाव विह्वल भइन् । गत सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यूएस बंगला एयरलायन्सको विमान दुर्घटनामा परी आप्mनो २४ वर्षीया डाक्टर छोरी गुमाएकी उर्मिला प्रधान पोस्ट्रमार्टममा राखिएको छोरीको शवको सम्पूर्ण पहिचानसहित हुलिया विवरण दिएर शव बुझ्न अस्पताल…